သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အဘယ်ကြောင့် App တစ်ခုလိုအပ်သည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 9, 2013 ကြာသပတေးနေ့, မေလ 9, 2013 Douglas Karr
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရိုင်ယန်ကော့ (စ်) သည်ဤမိုဘိုင်းသုံးစွဲသူအချက်အလက်အချက်အလက်ကိုဝေမျှခဲ့သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်စားသုံးသူအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါ။ ပိုပြီးအချက်အလက်ကိုနှစ်သက်ချင်တဲ့ support stats တွေရှိပါတယ်။ မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူအချိန်၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် app တစ်ခုပေါ်တွင်သုံးစွဲသည်။ အဲဒီထဲမှာသူတို့အီးမေးလ်ပါပါသလား ငါဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားတယ်
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်ရှင်းလင်းသောရုပ်ပုံများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှ၎င်း၏ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်အလားအလာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ပြန်ကောင်းလာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဗားရှင်း ၃ ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တယ် Martech Zone App ကိုယုံတော့မယ် အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး app ကို စျေးကွက်ပေါ်မှာအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Postano မိုဘိုင်း.
ဖောက်သည်များ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ငွေတောင်းခံခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုကူညီခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းများ…။ သင်သည်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်တတ်နိုင်သောမိမိကိုယ်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ကိရိယာများတိုးများလာနေပါသည် သင်၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုတည်ဆောက်ရန်!
Tags: မိုဘိုင်း appမိုဘိုင်း application များ
Curalate: အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်လူမှုရေး curation အလုပ်လုပ်
သင်၏အီးမေးလ်များကိုဘ ၀ သို့ရောက်စေရန်နည်းလမ်း ၅ ခု